दीपक मनाङेलाई सजायको फैसला आज हैन १० वर्षअघि नै, अब सांसद रहन्छन्? :: PahiloPost
काठमाडौँ : मंगलबार साँझ एकाएक सोसल मिडियामा हल्ला मच्चियो- सर्वोच्च अदालतले मनाङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित दीपक मनाङेलाई ज्यान मुद्दामा पाँच वर्ष जेल सजाय सुनायो।
सोसल मिडियाको हल्लालाई पछ्याउँदै टेलिभिजनहरुमा ब्रेकिङ न्युज स्क्रोल हुन थाले। केही बेरमा अनलाइनहरुमा पनि समाचार देखिन थाले।
अधिकांश समाचारमा सर्वोच्च अदालतले मनाङेलाई पाँच वर्षको जेल सजाय तोकेको भन्ने मात्र उल्लेख थियो। जबकि सर्वोच्च अदालतमा दीपक मनाङे वादी वा प्रतिवादी भएका कुनै मुद्दै थिएनन्।
त्यसो भए कसरी यो समाचार भाइरल हुन पुग्यो त?
२०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङसहितलाई सरकारले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो। बागबजारको उक्त घटनामा अन्य सम्मिलित थिए गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवार। गणेश लामा हाल कांग्रेसमा आबद्ध छन्।
६४ सालको सजाय
सरकारले पुनरावेदनको फैसलामा पुनः चित्त नबुझाउँदै चार प्रतिवादीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
मनाङले हालसम्म फैसला चित्त बुझाएर बसेका छन्। पुनरावेदनको फैसला अन्तिम भएको छ। मनाङेले अदालतको पुनरावेदन गर्ने म्याद गुजारेका हकमा फैसला कार्यान्वयनमा जानेछ। मनाङे जेल चलान हुनेछन्। तर, फैसलामा पुनरावेदनको म्याद बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्च जाने बाटो खुला नै छ।
सांसद् पद के हुन्छ?
ज्यान मुद्दा फौजदारी मुद्दा हो। मुद्दामा दोषी ठहर भएको फैसला भइ अन्तिम भएको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनसँगै पद स्वतः जानेछ। फैसलाको जानकारी सम्वन्धित प्रदेशसभामा वाचन गरी सुनाइनेछ। फैसला कार्यान्वयनसँगै पद रिक्तको सूचना दिइनेछ।
दीपक मनाङेलाई सजायको फैसला आज हैन १० वर्षअघि नै, अब सांसद रहन्छन्? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।